सफल जीवन कसरी तय गर्ने ? spacekhabar
स्पेसखबर काठमाडौं, ११ कात्तिक
जीवनमा कसरी सफलता प्राप्त गर्ने ? हामीलाई सधैं यही प्रश्नले लखेटिरहेको हुन्छ । सफलता पाउन, जीवन खुसी तुल्याउन त्यहीअनुरुपको लगाव, श्रम आवश्यक हुन्छ । सफलताका लागि लक्ष्य बनाउनुपर्छ साथै सार्थक प्रयास पनि ।
हामी हरेक दिन नयाँ योजना बनाउँछौं । जीवनमा के गर्ने, कसरी सफलता पाउनेमै घोत्लिन्छौं । यद्यपि सफलता भने सोचेअनुरुप प्राप्त भएको हुँदैन ।
सफलताका लागि हरेक महिना कम्तीमा एउटा राम्रो बानीको विकास गरौं । कुनै कुलत छ भने त्यसलाई छाडौं, अल्छीपन छ भने त्यसलाई त्यागौं । बिहान धेरै समय सुत्ने बानी छ भने चाँडै उठ्ने अभ्यास गरौं । जीवनमा स्वस्थ्य र खुसी रहने एक राज हो, बिहान चाँडै उठ्नु । यसले तपाईंको अतिरिक्त समय पनि बचत हुन्छ । शरीरमा स्फूर्ति बढ्छ ।
फलफूल सेवन गर्न जाँगर चल्दैन भने यसमा जोड दिऔं । क्रमशः आफूमा यस्तो सुधार ल्याउनुहोस् कि, जसले तपाईंको जीवनलाई उत्कृष्ट तुल्याउन सक्छ ।
असल र भरपर्दो साथी बनाउनुहोस्
जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउन तपाईंको साथी सर्कल पनि सकारात्मक, ऊर्जावान् र भरपर्दो हुनुपर्छ । भनिन्छ, यस्ता साथीको सर्कल बनाउनुभयो भने तपाईंको तनाव धेरै हदसम्म कम हुन्छ । तपाईंमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुन्छ । असल मित्र भनेको जीवनको अनमोल सम्पत्ति हो । यस्तो सम्पत्ति तपाईंसँग जति धेरै हुन्छ, उत्तिनै सहज र सुखमय जीवन बिताउन सकिन्छ ।
प्रत्येक पलको आनन्द लिनुहोस्
तपाईं चाहे काम गर्नुहोस् वा खाना खानुहोस् । व्यायाम गर्नुहोस् वा पुस्तक पढ्नुहोस् । यी हरेक गतिविधिसँग रमाउन सिक्नुपर्छ । जीवनमा आइपर्ने जति पनि काम छन्, त्यसबाट आनन्द लिन सिक्नुपर्छ । आफैंले आफूलाई खुसी तुल्याउनुहोस् । यसले तपाईंको जीवन उत्कृष्ट हुन्छ ।
पैसा बचाउन प्रयास गर्नुहोस्
अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नुहोस् । मितव्ययिता अपनाउनुहोस् । आवश्यक चिजलाई प्राथमिकतामा राखेर खर्च गर्ने बानी गर्नुहोस् । यसले गर्दा अनावश्यक खर्च हुँदैन र व्यायभार बढ्दैन । तपाईंको पैसा जति बचत हुन्छ, उत्तिनै जीवन सहज हुन्छ । यद्यपि आवश्यक परे खुला मनले खर्च गर्न पनि तयार हुनुपर्छ ।
हाँस्ने र हँसाउनेलाई जीवनको हिस्सा बनाउनुस्
भनिन्छ, जसले हाँस्न जानेको, उसले बाँच्न पनि जानेको छ । उन्मुक्त हाँस्नुहोस् । यसले तपाईंको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, मन प्रशन्न हुन्छ । आसपासको वातावरण पनि राम्रो हुन्छ । अरुलाई हँसाउने, आफू पनि हाँस्ने गर्नुहोस् ।
सधैं केही राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्
दिनमा हामी धेरै काम गरिरहेका हुन्छौं । कति काममा हाम्रो ध्यान गएको हुँदैन, कति कामप्रति हाम्रो रुचि हुँदैन । त्यही कारण हामीले गरेका सबै कामले राम्रो नतिजा दिँदैन । हामी जे काम गर्छौं, त्यसलाई कसरी उत्कृष्ट ढंगले गर्ने भन्नेमा सधैं प्रयासरत हुनुपर्छ । आफूले गर्ने कामलाई नयाँ र सिर्जनात्मक ढंगले गर्नुपर्छ । साथै मानिससँग राम्रो बोल्ने, राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ ।
दिनमा केही समय एक्लो रहन सिक्नुहोस्
हामी अक्सर अरुसँग व्यस्त रहन्छौं । अधिकांश समय धपेडीमा बित्छ । तर, दिनमा केही क्षण नितान्तः एक्लो हुनुहोस् । कम्तीमा पनि १० मिनेट एक्लो रहनुहोस् । यस समयमा तपाईं केही नयाँ सोच्न र योजना बनाउन सक्नुहुनेछ । दिनमा केही समय एक्लो रहनुको फाइदा भनेको मनको शान्ति पनि हो ।
नराम्रो सबै भुल्नुहोस्
जीवनको अर्थ हो, अघि बढ्नु । र, अघि बढ्नका लागि पछाडिको कुरा भुल्नुपर्छ । विगतका कमजोरी, गल्तीमा पछुतो गरी केही फाइदा छैन । विगतका सबै कुरा भुल्नुहोस्, जसलाई सम्झँदा तपाईं राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुन्न ।
स्वयंलाई अनुशासित बनाउनुहोस्
जीवनमा त्यहीबेला सकारात्मक परिवर्तन आउँछ, जब तपाईं स्वयं अनुशासनमा रहनुहुन्छ । जीवनमा अनुशासन एकदमै जरुरी छ । अनुशासित जीवनमा सफलता मिल्नु धेरै सजिलो छ । यदि तपाईं अनुशासित हुनुहुन्न भने, अरुलाई अनुशासनमा राख्न पनि सक्नुहुन्न । अरुलाई देखाउन होइन, आफ्नै जीवनका लागि अनुशासित हुनुहोस् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ११, २०७६, ०२:३८:००